Nzira yekugovana iCloud Calendar Chiitiko pane iPhone, iPad uye iPod touch | IPhone nhau
Imwe yesarudzo yatinayo muICloud khalendari ndeyekugovana chiitiko chakarongwa chero munhu ane iCloud. Saka munhu wese watinogovana naye chiitiko achagamuchira ziviso zvakafanana uye zvinonyoreswa otomatiki kana vachinge vakazvigamuchira mukarenda yavo
Kana zviri zve kopi yakanangana nekarenda yedu kune imwe khalendari yevamwe, iine yambiro, zviziviso uye zvese zvatakanyora mariri. Iyo inzira inoshanda kwazvo yekugovana zviitiko nevamwe vanhu pane chero chishandiso cheIOS.
Kuita chiito ichi zviri nyore se svika pakarenda yedu, tinya pazasi sarudzo Chalenda tinya pane iCloud (Pano isu tinogona kuve nemakarenda akati wandei mune kesi yekuti isu takafananidza iwo emaemail edu kana edu edu iPhone, isu tinofanirwa kuwana iyo iCloud) tinya pane «Ini» kugovana chiitiko chatiri kuda tobva tawedzera munhu kana vanhu vatinoda kugovana navo chiitiko.
Patinozvitumira, iye anogamuchira izvi anogamuchira yambiro mukendendende imwechete, pazasi kurudyi «Kupinda». Nenhanho idzi zviri nyore kukurumidza kugovana chiitiko pakarenda yedu nevamwe vanhu zvinobudirira uye nekukurumidza. Zvine musoro, kana ichigovaniswa neemail, isu tinofanirwa kunge tambove neemail yekutaurirana kwedu akanyoreswa mudariro. Ichi chiito chinotibvumidza kugovana chero mhando yekarenda yatinayo pane yedu iPhone, iPad kana iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekugovana iCloud Calendar Chiitiko pane iPhone, iPad, uye iPod touch